I-Narcissos Villa Doria
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Andreas
I-NARCISSOS VILLA DORIA ime endaweni enkulu, yangasese enendawo yokupaka ngaphandle komgwaqo futhi isendaweni ethule yaseCavo Greco yaseProtaras, phakathi kwezindawo zokungcebeleka zezivakashi ezimbili ezidume kakhulu eCyprus; i-cosmopolitan AGIA NAPA kanye ne-PROTARAS ephumuzayo. I-KONNOS BAY edumile iqhele ngekhilomitha elilodwa kuphela kanti iFIG TREE BAY ingamakhilomitha amabili. I-Narcissos Villa Doria isendaweni efanayo yezakhiwo ezine njenge-Narcissos Villa 2 kanye ne-Narcissos Villa 3, okwenza kube lula ngemindeni emi-3 noma emi-4 ukujabulela amaholide ayo eduze komunye nomunye.
Amamitha angamakhulu amathathu kuphela ukusuka ogwini oluseduze, le villain enhle, esanda kulungiswa enamagumbi amabili okulala inesiphephetha-moya futhi inikeza ngendawo yokuhlala enedamu lokubhukuda elizimele, imibhede yelanga, nezambulela. Ikhishi elikhanyayo nelesimanje elinepulani elivulekile, izindawo zokuhlala nezokudlela zivulekele endaweni yokubhukuda, eduze komthunzi we-pergola onefenisha yokudlela yangaphandle. Kukhona indawo yokosa inyama ehlome ngokuphelele eduze kwechibi kanye nomthunzi we-pergola.
Phansi phansi, ikhishi elihlome ngokuphelele lihlanganisa iwasha izitsha, umshini wokuwasha, umpheki, umenzi wekhofi, itoaster, shaker, iketela kanye nohhavini wemicrowave. I-TV yesikrini esiyisicaba (eneziteshi zesathelayithi zesiNgisi nezaseRussia), i-Wi-Fi yamahhala yesivinini esiphezulu kuyo yonke indawo, isitiriyo, isomisi sezinwele, ibhokisi lediphozi lokuphepha nezinto zoku-ayina.
Esitezi sokuqala kunamakamelo okulala amabili, elilodwa elinombhede ophindwe kabili nelilodwa elinemibhede emibili eyodwa.
I-villa itholakala endaweni ekahle emzileni wamabhasi oseduze nendawo yokungcebeleka edumile yaseProtaras kanye nendawo enokuthula yaseCavo Greco futhi ihlinzeka ngakho konke okudingwa yinoma ubani ngeholide elingenandaba nelanga!
Isikhungo sase-Ayia Napa - 10 km
I-Ayia Napa Monastery - 10 km
I-Ayia Napa Sea Caves - 10 km
I-Ayia Napa Water Park - 14 km
I-Cavo Greko National Park - 1 km
i-fig tree bay - 2 km
I-Konnos Beach - 1 km
I-Lidl Supermarket - 2 km
Isitolo esikhulu - imizuzu emi-5 ukuhamba
Ibhishi eliseduze - 3 min ukuhamba ngezinyawo
Indawo yokudlela eseduze - 5 min ukuhamba ngezinyawo
I-Nissi Beach - 12 km
Inzuzo Elias Church - 4 km
I-Protaras Beach - 2 km
Isikhungo seProtaras - 2 km
I-Protaras Main Strip - 2 km
I-Protaras Ocean Aquarium - 2 km
Hlola ezinye izinketho ezise- Protaras namaphethelo